कारागारमा झडप हुँदा २९ जनाको मृत्यु ! - Dna Nepal
कारागारमा झडप हुँदा २९ जनाको मृत्यु !
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०१:२७
भेनेजुयलाको अक्कारिगुवा शहरमा रहेको कारागारमा झडप हुंदा कम्तिमा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परि कम्तिमा १९ जना प्रहरी घाईते भएका छन् । बन्दीहरुसंग हतियार रहेको र उनीहरुले ग्रिनेट विष्फोट गराएको प्रहरीले जनाएको ।